Endrik'io pejy io tamin'ny 23 Septambra 2018 à 19:58
Aucun changement de taille , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Aogositra 2018 à 20:08 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 23 Septambra 2018 à 19:58 (hanova) (esory)
Ny '''monoteisma''' dia finoana andriamanitra tokana na finoana ny maha tokana an’Andriamanitra. Ny [[politeisma]], – izay finoana andriamanitra maro, no tena mazava ny fifanoherany aminy. Telo ny fivavahana fantatra mazava fa monoteista, dia ny [[jodaisma]] sy ny [[kristianisma]] ary ny [[silamo]]. Ny monoteisma dia angamba namboka tany amin’ny taonjato faha-14 tal. J.K., niaraka amin’ny nanombohan’ny faraôna Amenofisy IV nivavaka tamin’i Atona, andriamanitra masoandro, izay ninoana fa fara tampony sady tokana. Ny [[zoroastrisma]] dia fivavahana tany Persia izay azo lazaina koa ho monoteisma. Nefa ny fotoana fantatra mazava nipoiran’ny monoteisma dia tamin’ny fandraisan’ireo [[Hebreo (mponina)|Hebreo]] ny fivavahana amin’Andriamanitra, dia ilay andriamanitra tokana, indrindra tamin’ny fivoahan’izy ireo avy tao Ejipta.
Tsy mifanaraka amin’ny monoteisma ny fampianarana ny Trinite hoy ny antokom-pivavahana kristiana sasany isan’ireo niforona avy amin’ny [[Reformasiona]] (na Reforma). Izy ireo dia manohana ny atao hoe [[onitarisma|onitarisma,]] izany hoe Andriamanitra dia tsy persona telo fa tokana. I Fausto Socin dia namorona ny fiangonana manohitra ny Trinite tao Eoropa Atsinanana atao hoe “Rahalahy Poloney”. Ny onitarisma dia niitatra tamin’ny taonjato faha-19 tany amin’ireo firenene anglo-saksona sy tany Amerika Latina. Maro koa ireo fivavahana kristiana izay manohitra ny Trinite, ka isan’ireny ny [[Vavolombelon'i Jehovah|Vavolombelon’i Jehovah]].
=== Monoteisma ao amin’nyamin'ny fivavahana silamo ===
Ny fivavahana silamo dia monoteista sahala amin’ny fvavahana jiosy. Ny anaran’Andriamanitra dia Allah. Izany mahatokana an'Andriamanitra izany no atao amin'ny teny arabo hoe ''Tawhîd'' izay hamafisina amin'ny fanekem-pinoana (arabo: ''Shahâda'') hoe: "Manambara aho fa tsy misy andriamanitra hafa afa-tsy i Allah ary i Mohamady no irak'Andriamanitra".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/876495"